We.com.mm - (၂)ရက်ဆက်တိုက် ရေမချိုးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ … ?
(၂)ရက်ဆက်တိုက် ရေမချိုးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ … ?
အေးလို့၊ ချမ်းလို့၊ ပျင်းလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ရေချိုးပျင်းတဲ့သူတွေ အများကြီးပါဘဲ။ အခုလို ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင် ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ် ရေချိုးဖို့ တွေးလိုက်တိုင်း ရေချိုးတာကို စစ်တိုက်ခိုင်းတာထက်တောင် ကြောက်မိတာတော့ အမှန်ပါ။ ကဲ .. ဟုတ်ပီ ဒါဆိုရင် ရေကို (၂)ရက်ဆက်တိုက် မချိုးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ ပြောကြရအောင်ဗျာ …။
လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ကပ်ညှိနေတဲ့ မမြင်ရတဲ့ ပိုးမွှားတွေထဲမှာ ဘတ်တီးရီးယားပေါင်း (၁)ထောင်ကျော်နဲ့ မှိုအမျိုးအစားပေါင်း (၄၀)ကျော်ရှိပါတယ်။ တချို့ ဘတ်တီးရီးယားတွေဟာ အထောက်ပြုတယ်ဆိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေက ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် (၂)ရက်ဆက်တိုက် ရေမချိုးဘူးဆိုရင်တော့ ဘတ်တီးရီယားတွေနဲ့ မှိုတွေဟာ အရေပြားပေါ်မှာ စွဲကပ်လာပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်ရေချိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအရာတွေကို အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေဆိုးကျိုးတွေရှိလဲ… ? ဘတ်တီးရီးယားတွေ၊ မှိုတွေ စွဲကပ်တဲ့အခါ ယားနာတွေ၊ အရေပြားရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တချို့ ဘတ်တီးရီးယားတွေဟာ နှာခေါင်း၊ မျက်လုံးနဲ့ ပါးစပ်မှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်သွားပြီး သင့်ကို နာမကျန်းဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ (၂)ရက်ဆက်တိုက် ရေမချိုးဘူးဆိုရင် အနံ့အသက်ဆိုးတွေလည်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို အနံ့ဆိုးထွက်စေတဲ့အဓိကတရားခံတွေကလည်း ဘတ်တီးရီးယားတွေနဲ့ မှိုတွေပါပဲ။ ဒီအရာတွေဟာ ဆိုးရွားတဲ့အနံ့ပေါင်း (၃၀)ကျော်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လောက်ပဲ အေးပါစေ၊ ဘယ်လောက်ထိ ပျင်းပါစေ အနည်းဆုံး (၁)ရက်တစ်ခါတော့ ရေချိုးသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်ရင်း တစ်ခါတည်း ရေချိုးလိုက်ရင်တော့ ပိုးမွှားတွေလဲ သေသလို ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာအနံ့လေးနဲ့အတူ တနေ့လုံးလည်း သင့်ကို လန်းဆန်းစေမှာပါ။
အလုပ်ခွင်ဆီသယ်သွားလို့ရမယ့် အင်အားဖြည့်အစားအသောက် (၅) မျိုး
ကိုယ့်အဝတ်အစားတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်နေစေဖို့ စနစ်တကျနဲ့ဘယ်လိုခေါက်ရမလဲ?
သင်္ကြန်ချိန်ခါမှာ အရက်နာမကျပဲ လေးရက်စလုံးအပီကဲနိုင်ဖို့
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အစားအသောက်များ
3 years ago by we.com.mm
လူငယ်ဘဝက ဖြုန်းတီးခဲ့မိတဲ့ နောင်တရစရာ ၄ ခုကို ဝေမျှပေးခဲ့တဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး
ဓာတ်လှေကားထဲမှာ ရုတ်တရက်ပိတ်မိသွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
ကျန်းမာရေးကောင်းကြောင်း အသိပေးနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာများ
ဖခင်ကိုယ်စား ပရဟိတလုပ်နေတဲ့ ဖခင်ခြေရာနင်းမယ့် ပေါလ်ဝေါ်ကာရဲ့ မိုဒယ်သမီးငယ်
ပုလဲမစ်ရှိတ်တွေမှာပါတဲ့ Tapoica Bubble ( ကျောက်ကျောလုံး ) ရဲ့ ကြောက်စရာဆိုးကျိုးများ